Kana Iwe Ukaita Izvi Zvinhu Zvishanu, Uri Kurarama Hupenyu Kudiki Zvidiki - Blog
Paunofunga nezveramangwana rako, unofungidzira zvakawanda zvebudiriro uye mufaro wakawanda here? Unorota uine hupfumi uye mukurumbira here? Unogona kuzvifungidzira pachako uchigara muhombe?
Kana zvirizvo, sei usiri kunze uko uri kurarama iyo kurota izvozvi? Ipo kugara hukuru kusingafanirwe kusanganisira yatchts kana dzimba, zvinofanirwa kusanganisira iwe kurwira rarama hupenyu kune kugona kwese kuzere . Kunyange isu tese tichirota zvakakura, saka vazhinji vedu tinorarama hupenyu hwakanyanya kushoma.
Heano zviratidzo zvishanu zvekuti uri kurarama hupenyu hwako hudiki kwazvo (uye zvekuita nezvazvo).
unonzwa kunge murume manje
1. Unogara Uchinetseka
Iwe uri worwartwart here? Iwe unogara uchidya nekutya pamusoro pezvese zvinogona kuitika? Iwe unonetseka here kuti shamwari yako yepamwoyo kana mumwe wako anga ari mutsaona yemotokari nguva dzese pavanenge vasingadaire foni yako? Iwe unozvityaira pachako nzungu uchifunga kuti kana chamupupuri chicharova imba yako here?
Kunetseka hakuite chero chinhu chakanaka, kunyanya kana iwe usina simba pamusoro pemhedzisiro.
Kunyange zviri nyore kutaura pane kuzviita, edza kuendesa rese simba raunoisa mukushushikana. Kana iwe uri kuzvitambudza iwe pachako pamusoro pemamiriro ezvinhu, zvibvunze kana paine chaungaite kuti ugadzirise. Kana pasina, ngazviende. Tarisa pane chimwe chinhu.
Handifungi kuti pane chero chinhu iwe kana ini chandingaite kuchengetedza chamupupuri kure. Saka vhura bhuku rakanaka kuti uverenge kana kuteerera kumwe mimhanzi nguva inotevera paunonzwa kushushikana kuchipinda mukati.
2. Iwe Unodzivisa Kukonana Pazvinhu Zvese
Hazvina basa kuti zvinhu zvinotyisa zvinosvika sei, iwe chingodzikisa musoro wako uye tariro hupenyu hunofamba. Iwe haugone kufungidzira uchiunza zvinokunetsa (kunyangwe zviine musoro sei) nekuti pfungwa yekukonana inokuita kuti urware kudumbu rako.
Unorega vanhu vafambe pamusoro pako vasina kana kumbotaura kana izwi. Ko kana mumwe munhu akatsamwa? Ko kana vakataura zvakaipa pamusoro pako? Ko kana zvinhu zvikashata? Iyi ndiyo mibvunzo inokutadzisa kutaura pfungwa dzako.
Ichokwadi ndechekuti, kuti urarame hupenyu zvizere, unofanirwa kugona mira wega . Ukasazvidzivirira, ndiani achadaro?
Nepo paine nguva dzose mukana wekukonana, kuzvimiririra pachako hakugare kuchigumbura vanhu. Pane nzira yekuzviita pasina kuva asina hunhu kana kusaremekedza . Kazhinji yenguva, vanhu vanogona kugamuchira yakaoma mhinduro.
Kana iwe uchida kuenda kumberi muhupenyu hwako, taura! Rega vanhu vazive zvaunofunga, kunyangwe paine mukana wekupokana.
Eddie guerro akafa riinhi
Nzira gumi dzeKuti Upenyu Hwako Pamwe Pamwe Uye Zvese Zvese
Chii Chiri Chinangwa Uye Chinongedzo cheHupenyu? (Hazvisizvo Zvaunofunga)
Yekupedzisira Rondedzero Yemakumi matatu Mibvunzo Yekuzvibvunza Iwe Nezve Hupenyu
3. Hautombokumbira Rubatsiro
Iwe unogona kutenda kuti zvirinani kuti vanhu vakutsvage iwe kunze kwekuzviisa iwe kunze uko uye nenjodzi yekurambwa. Iwe hautombotauri kunze kwekunge mumwe munhu anyatso kubvunza zvaunofunga.
Iwe hauna kumbira rubatsiro uine basa rausinganzwisise. Haumbobvunze shamwari dzako kuti dziende kumamovie. Wako kutya kurambwa yakakura kudarika yako shuwa yekurarama yakakura.
Zvirinani kugara pasi womirira mumwe munhu kuti akuteterere kuti urarame hupenyu hwako wega? Ko kana munhu iyeye asina kumbouya? Unogona kunge uchirasikirwa nemikana iwe yausina kumboziva kuti yaivepo.
Vanhu vanorarama hupenyu hukuru, hwakabudirira ndivo vanhu vasingatyi kubvunza. Muchokwadi, ava ndivo vanhu vanoziva kuti vanogona kubvunza nzira yavo kune hupenyu huri nani.
Kana vachida kukwidziridzwa, vanozvikumbira. Kana vachida kubuda musi, vanobvunza munhu akabata ziso ravo. Kana vachida kudzidza chimwe chinhu chitsva, vanokumbira mumwe munhu kuti avadzidzise.
Dzimwe nguva unogona kunyara kana kuudzwa kwete, asi iwe unowana zvakare yakawanda yakawanda mikana yekurarama hupenyu huri nani uye hunonakidza kana iwe ukangobvunza.
4. Hauite Nguva Yekuzviongorora
Kana iwe wakabatikana zvakanyanya kutarisa kunze pane zvemukati, unovhiringidza kugona kwehupenyu hwako.
Kana iwe uchifunga zvakanyanya pamusoro pezviri kuitwa nevamwe pane izvo zvauri kuita, kana kana iwe uchichiva vamwe vanhu kakawanda kupfuura zvauri ndinotenda nezvamunazvo muhupenyu , mikana ndeyekuti urikurarama hupenyu hushoma.
Kuisa mari mauri kuburikidza kuzviratidza unogona kubhadhara mibairo mikuru mukukura kwehupenyu hwako, hwehunyanzvi, uye hwemweya.
Funga kumashure kwemwedzi miviri yekupedzisira yehupenyu hwako.
Wakave nezvakaitika zvinopfumisa here?
Wakaita chero chinhu kusimbisa hukama hunoreva zvakanyanya kwauri?
Waka verenga chero mabhuku anokurudzira ?
Wakaita chero chinhu chakasimudza mweya yako kana kukwidza kuzvivimba kwako?
Kana iwe usingakwanise kupindura iyo mibvunzo zvakanaka, pedza imwe nguva ikozvino kuronga kuti ungararama sei zvakakura nekuzvitarisa kubva kune imwe kona.
5. Haugone Kubata Kushoropodza Kunovaka
Uri kupfeka jasi rinorema rezvombo pese paunosangana nevanhu, nekuti unotya kutsoropodzwa?
Kana iyo pfungwa yemhinduro isina kunaka ichiita kuti dumbu rako rive neruzivo kumusoro, iwe uri pamwe uri kurasikirwa nemikana yekuzvivandudza iwe pachako. Kana yako yekumhanyisa nhangemutange kana kumeso kwako kukachinjika akati wandei mutsvuku munhu asati ataura zviri pamoyo pavo, unogona kunge uri kuputira chinhu ichocho kubva muchiyero.
Rangarira kuti isu tiri vatsoropodzi vedu pachedu. Kunze kwezvo, zvine basa here kuti vamwe vanhu vanofungei nezvako zvakadaro? Usarega pfungwa dzemumwe munhu dzichikumisa kurarama hupenyu hwakazara ungafungidzirwa.
Kana vanhu vachipa inovaka mhinduro , tora semukana wekuzvivandudza - kana kushoropodzwa kuchinyatsoitika.
Vanhu kazhinji havarwisane kana kubuda munzira yavo kuti vataure zvinhu zvinorevesa. Ivo vanowanzo kuedza kukubatsira kunze, saka rega ivo.
mibvunzo inoita kuti iwe ufunge
Kunyangwe iwe usingabvumirani nezviri kutaurwa, chiitiko hachifanirwe kuve chinotyisa. Iko hakuna kudikanwa kwekutora zvese zvakadaro pachezvako . Tora nechibage chemunyu uenderere mberi nehupenyu hwako.
Wagadzirira here muka mangwanani oga oga nechishuwo chekuona kuti zuva rakakuchengetera chii? Wakagadzirira here kusunungurwa kubva pane yakapfuura uye mune ramangwana kuitira kuti rarama panguva ino ?
Kana chimwe chezviratidzo izvi zvishanu chakatarisana nehupenyu hwako hwazvino, hazvina kunonoka kurega kurarama zvidiki. Nyika iri kunze uko yakamirira kuti iwe upinde mukati!
Ex wangu ari kuedza kundidzosa
yakanaka mibvunzo yekubvunza yako yakakosha imwe
mibvunzo yekuziva yako yakakosha imwe
apo iwe usingakwanise kuudza mumwe munhu manzwiro aunoita
munhu anogona kuchinja nzira dzake here?
zvekupenga zvekuita pamba
sei kurarama pasina shamwari